Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi Amaqiniso we-Eberechi Eze Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-athikili yethu ikunikeza isembozo esigcwele se-Eberechi Eze Childhood Indaba, I-Biography Amaqiniso, Ukuphila Komndeni, Abazali, Ukuphila Kwasekuqaleni, Indlela Yokuphila, Intombazane, Ukuphila Komuntu kanye nezinye izehlakalo eziphawulekayo kusukela esemncane kuya lapho esaziwa kakhulu.
Impilo nokuvuka kuka-Eberechi Eze. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngesitayela sakhe esinamandla sokudlala namakhono obuchwepheshe. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu ye-Eberechi Eze's Bio ethakazelisa impela. Manje, ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi, ake siqale.
Indaba Yengane Ka-Eberechi Eze:
U-Eberechi Oluchi Eze wazalwa ngosuku lwe-29th lukaJuni 1998 endaweni yaseGreenwich eSouth East London, eNgilandi. Ungomunye wezingane ezingekho ngaphansi kwe-3 ezizalwe abazali okungekho okuningi okwaziwayo ngaleso sikhathi sokubhala i-biography yakhe.
Ngamandla endawo yakhe yokuzalwa nombala, u-Eze ungumuntu wobuzwe nama-Anglo-African of East-Nigeria. Njenge Chris Smalling, yomibili imindeni yabo endaweni efanayo yaseLondon. U-Eze Eberechi wakhulela endaweni efanayo nabazakwabo ababili - uChima no-Ikechi - ababengaba mdala noma babade kunaye.
U-Eberechi Eze osemusha wakhuliswa enhlokodolobha yaseLondon. Cred: IG ne-WorldAtlas.
Ukukhulela kwesinye sezibhedlela ezindala eziseduzane naseGreenwich enhlokodolobha yaseNgilandi, u-Eze osemncane wayeyingane esencane yemidlalo edlala ibhola njengomdlalo wezingane ngezizathu zokuzijabulisa nezokweqa.
Ukuqala ngokuphunyuka, indawo lapho umndeni ka-Eberechi Eze wahlala khona futhi lapho akhulela khona kwakungeyona indawo enhle- akukho okubonga izinto zobugebengu. Kwakuyindawo nje lapho abazali bakhe baseNigeria ababengaba namandla okuphila ngemuva kokuthuthela eNgilandi eminyakeni eminingi ngaphambi kokuba azalwe. Njengabafuduki abafanayo abavela emndenini waseNigeria, abazali baka-Eze bebengabesigaba esiphansi.
Akukho okuningi okwaziwayo ngabazali baka-Eberechi Eze ngesikhathi sokubeka le bio. Isikweletu Sezithombe: ClipArtStudio
Ngakho-ke, u-Eze wayengenazo izingane eziningi zobudala bakhe eduze komakhelwane bakhe. Noma kunjalo, wakujabulela ukuthola izizathu ezivamile nezingane ngokudlala ibhola ngokwenkolo naye nganoma yiliphi ithuba elinikezwe.
I-Eberechi Eze Yezemfundo Nokwakha Umsebenzi:
Indawo yokuqala umdidiyeli webhola owayedlala ngaleso sikhathi kanye nontanga yakhe babevame ukuya kuyo ngemuva kwesikole kwakuyindawo okwakudlalwa kuyo lapho bebedlala khona ibhola isikhathi eside kuze kube yilapho abazali babo bezofika bezobabiza.
Umuntu owayengumdlali webhola ngaleso sikhathi wayevame ukudlala ibhola nabangane bakhe ngemuva kwesikole. Cred: Pinterest.
Ngenkathi u-Eze ekhona, wayazi ukuthi ufunda ubuciko obalulekile kwezemidlalo obungamenzela igama. Wayebuye aqaphele namathuba okuqala umsebenzi omuhle wokukhuthazeka kunoma iyiphi i-football academy ehlonishwayo.
Iminyaka Yasekuqaleni Ka-Eberechi Eze Ebholeni:
Lapho isikhathi silungile, u-Eze waqala ukuziqeqesha nezinhlelo zentsha ye-Arsenal kodwa wadedelwa ngonyaka ka-2011 ngoba iklabhu yaseLondon ayizange imbone omncane ngaleso sikhathi oneminyaka engu-13 njengethemba elihle. Ngenkathi i-Arsenal imenqaba, yavuma Eddie Nketiah, elinye i-rejectee laseChelsea ababenomuzwa wokuthi lingcono.
Ukwenqaba kubuhlungu, kepha akudingeki kumbambe. Njengoba bekulindelekile, abazali baka-Eberechi Eze namalungu omndeni benze konke okusemandleni ukusiza u-Eze ukuthi aqhubeke nokuqina ngokomqondo ngalesi sikhathi.
Yize ukuhoxa kwenza u-Eze wadangala isikhashana, wakwazi ukuzikhethela futhi wagcina indawo eFulham academy lapho aqala khona ukujabulela ibhola futhi. Emuva kokuzama ukwenza umsebenzi wasemuva wabona u-Eze ethola isitebele sezinyanga ezi-4 kuFunda FC ngaphambi kokuthi ajoyine iMillwall FC njengomuntu oneminyaka eyi-16 ngonyaka ka-2014.
Isithombe esingajwayelekile sakhe sidlalela iMillwall FC Image Isikweletu: Instagram.
I-Eberechi Eze's Biography - Indlela Yodumo
Ubuwazi ukuthi u-Eze ukhishwe kwi-Millwall FC lapho nje ecabanga ukuthi ikusasa lakhe nekilabhu liyathembisa ukuthi lizohamba ngendlela eyiyo? Futhi, le ntuthuko edabukisayo yayimangaza futhi idabukisa ingane. Noma yimuphi umdlali webhola osemusha oye waphila ngokukhishwa hhayi kanye kuphela kodwa kabili uzokwazi kahle kakhulu ubuhlungu obukhulu obungokomzwelo obungabubangela.
Ngemuva kokukhishwa kwakhe isimanga nguMillwall, u-Eze wadabukisa ngokutshela abazali bakhe namalungu omndeni ukuthi uzoyeka ibhola. Ucabangi ukuthatha umsebenzi wesikhashana eTesco kanye nokuqhubeka nezifundo zakhe ekolishi kodwa washeshe wathola ucingo lokujoyina iQueens Park Rangers (QPR).
Kwenjabulo yakhe, bazali kanye namalungu omndeni, i-QPR yaba umthombo wenduduzo kulokho kwakhe okukhathazayo. U-Eze oneminyaka engu-18 wamukela ithuba lokudlala futhi ngokusayina inkontileka yakhe yokuqala neqembu ngo-Agasti 2016. Ngokwabo, i-QPR yanikeza u-Eze ithuba lokukhombisa ithalente lakhe futhi athuthukise amakhono akhe okubandakanya ukumthumela kuWycombe Wanderers ngemalimboleko ngonyaka ka-2017.
Umlando ka-Eberechi Eze's - Rise To Fame Story:
Lapho eseqede unyaka wakhe wemali mboleko ehlaba umxhwele, u-Eze walethwa ekilabhini yakhe yabazali lapho enze kahle khona ukuvikela isikhundla sakhe njengewina. Masinyane phambili onyakeni ka-2020, u-Eze ungowokuwina umphathi wemenenja ye-QPR yakhele iqembu lakhe nxazonke.
Umwina ujabule ku-QPR lapho ebaluleke khona eqenjini. Isithombe: ESPN.
Umdlali webhola lezinyawo waseNigeria Umsuka Womndeni akakude nokuba senkingeni yokuthi umdlali omkhulu webhola lezinyawo. Kodwa-ke, uhambela umugqa wokuba esinye sezethembiso ezinhle kakhulu ze-England ebholeni.
Ukuqhubekela phambili kumanje kuma-radar amaqembu aphezulu ase-Europe ngenkathi i-England neNigeria benza futhi imizamo yokuvikela ukusayinwa kwakhe ukwenza umsebenzi waphesheya. INigeria isenethemba elikhulu lokuthi umfana uzoyidlalela iSuper Eagles. Lokhu kufaka phakathi ukulandela indlela yabadlali baseKhaya eNgilandi abafana neSone Aluko, UVictor Moses, Shola Ameobi, Alex Iwobi no-Ola Aina.
Intombi ka-Eberechi Eze- ingabe ayishadanga noma ishadile?
Ukuqhubekela phambili empilweni ye-Eze Eberechi, ngeke sisho ngokuphelele ukuthi akashadile. Lokhu kungenxa yokuthi izithombe ezimbili ezikwikhasi le-winger le-Instagram ziphakamisa ukuthi unentombazane encane eyaziwayo.
Intombazane ka-Eze Eberechi ayibheki nje kuphela njengalowo onezimpande zase-Afrika kepha ishaya abalandeli njengomdlalo ophelele walowo ohlaba umxhwele. Siyethemba impela ukuthi ama-duo ayathandana futhi anezinhlelo ezinkulu zekusasa.
Izithombe ezinhle zika-Eberechi Eze nentombi yakhe encane eyaziwayo. Umthombo: I-Instagram.
Impilo Yomndeni ka-Eberechi Eze:
Umndeni ubukade ungumbhede wohambo luka-Eze ebholeni kusukela esemncane kuze kube manje. Kulesi sigaba, sizophonsa ukukhanya okuningi kubazali baka-Eberechi Eze kanye namalungu omndeni.
Mayelana nobaba ka-Eberechi Eze nobaba:
U-Eze okwamanje uzodalula ukuthi ungubani abazali bakhe baseNigeria kodwa siyaqiniseka ukuthi bangabathandi bebhola nabazali abangisekelayo. Eqinisweni, i-winger yahlonipha umama wayo ngokududuza kwakhe ngemuva kokususwa kwakhe okungaxhunyiwe ku-Arsenal academy.
Ngakolunye uhlangothi i-Soccer Federation yaseNigeria - ngasekupheleni kuka-2019 - bathi baxoxa nobaba nobaba ka-Eze ngenhloso yokuthola umuntu ozosayina naye ngenhloso yokwenza umsebenzi ngenhloso. Izingxoxo zikhuluma kakhulu ngokubandakanyeka kwabazali baka-Eze empilweni yakhe yomsebenzi.
Mayelana Nezingane Zika-Eberechi Eze nezihlobo:
I-winger iyaziwa ukuthi inezingane ezimbili zakubo. Bangabafowabo u-Ikechi noChima. U-Ikechi ungumdlali webhola odlalela iBraintree Town football club (njengoba kwenzeka ngo-Ephreli 2020). Ngokwakhe, uChima ubukeka njengo-Eze. Unentshisekelo ekuthengeni imfashini nokuthenga online.
U-Eberechi Eze nabafowabo u-Ikechi (kwesobunxele) noChima (kwesokudla). Umthombo: I-Instagram.
Ukude nempilo yomndeni ka-Eze, akukho okuningi okwaziwayo ngemvelaphi yakhe nangokomndeni wakhe ikakhulukazi njengoba behlobana nogogo wakhe kanye noyise kamama wakhe. Ngokunjalo, awkho amarekhodi wababekazi ka-Eze, omalume kanye nabazala bakhe kanti umshana wakhe nomshana wakhe namanje akwaziwa.
Impilo Yomuntu Eberechi Eze:
Kude nomlingiswa wakhe we-on-pitch, u-Eberechi Eze ufaka izici zobuntu obufana nezibandakanya ukuqina, ubuhlakani bezemizwa nobuhlaya obuhlukile. Ngaphezu kwalokho, uyazi ukuthi ungalinganisa kanjani ngokuphelele ukuvelela ngesimo sengqondo esifanele.
Umwina owesabekayo ogama lakhe leZodiac yiCancer awembuli imininingwane ephathelene nempilo yakhe yangasese neyomuntu siqu. Imisebenzi eyakha izintshisekelo zakhe nezinto zokuzilibazisa zihlanganisa ukubukela ama-movie, ukulalela umculo, ukudlala imidlalo yevidiyo nokuchitha isikhathi esihle nomndeni nabangane.
Bheka esinye sezibalo zebhola ezimbalwa ezijabulela umculo ngaphandle kokuvala amehlo. Umthombo: I-Instagram.
Indlela ka-Eberechi Eze:
Mayelana nokuthi u-Eze Eberechi uyenza kanjani futhi uyisebenzisa kanjani imali yakhe, unenani elilinganisiwe lemali elingaphezu kwe- $ 1 million ngesikhathi sokubhala le bio. Ukufaka isandla ekusungulweni kwe-winger kufaka phakathi amaholo nemholo alitholayo ngokudlala ibhola leqembu lokuqala.
Ungaphezulu kwe- $ 1 million (izibalo ezingama-2020) ebhala le bio. Isithombe: I-Instagram ne-Photofunia.
Ngaphezu kwalokho, ukuvumelanisa ngemikhiqizo efana ne-Adidas kwenza okuningi ukukhulisa umnotho ka-Eze. Kanjalo, akahlukani nobumnandi bempilo obuhlanganisa ukuhamba ngomgwaqo emigwaqweni yaseLondon ngezimoto zakwamanye amazwe kanye nokuhlala ezindlini ezinhle.
Amaqiniso ka-Eberechi Eze:
Ukuphelisa i-bio yethu ka-Eberechi Eze, nazi amaqiniso amancane noma awaziwa nge-Untold mayelana ne-winger.
Iqiniso # 1 - Ukwephulwa Komholo:
Ngomhlaka 3 ku-Agasti 2016, phambili wasayina isivumelwano ne-QPR, eyambona ethola iholo elikhuphuka ku- $ 273,000 (313,051 Euro) ngonyaka. Ukuphula iholo lakhe ngezinombolo ezincane, kusho ukuthi uhola okulandelayo.
Ngonyaka: £ 273,000 € 313,051
Ngenyanga: £ 22,750 € 26,088
Isonto ngalinye: £ 5,291 € 6,067
Ngosuku: £ 756 € 867
Ngehora ngalinye: £ 32 € 36
Ngomzuzu: £ 0.53 € 0.6
Ngesekhondi: £ 0.008 € 0.01
Eberechi Eze Umholo wokuqhekeka
Yilokho U-EBERECHI EZE uzuzile selokhu waqala ukubuka leli khasi.
Uma okubonayo ngenhla kufundeka (0), kusho ukuthi ubheka ikhasi le-AMP. OKUNGEKHO-AMP amakhasi azobona umholo wakhe enyuswa ngomholo wesibili ngamunye.
Uthi bewazi?… Isakhamuzi esijwayelekile sase-UK esiholayo £ 2,830 ngenyanga uzodinga ukusebenza izinyanga eziyi-8 ukuze uthole £ 22,750 okuyimali etholwa u-Eze ngenyanga.
Iqiniso # 2 - Izikhundla zeFifa:
U-Eze unesilinganiso se-FIFA sisonke samaphuzu angama-75. Isilinganiso esingesihle sisebenza okwesikhashana ekukhanyisweni nasefomeni elihle eselikhonjelwe kamuva nje. Ngakho-ke, yindaba kuphela yesikhathi ngaphambi kokuba abalandeli babone u-Eze efinyelela amandla akhe wamaphuzu angama-83.
Ngaphandle kokungabaza, amazinga ka-Eberechi Eze we-SoFIFA (izibalo ze-FIFA 20) akhombisa yena eceleni kwezaziso- ukuthandwa USamuel Chukwueze, I-Boubakary Somare futhi Curtis Jones bangabadlali besikhathi esizayo.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi lesi isiqalo sakhe sokuthobeka. Image: SoFIFA.
Iqiniso # 2 - Inkolo:
I-winger isazoshiya izikhombisi ngokubheka ukuthi uyikholwa noma cha. Kodwa-ke, izingqinamba zivuna abazali baka-Eberechi Eze abamkhulisa ukuba abe yikholwa elenza ubuKristu. Le nkolo ifana kakhulu nokususwa kwe-Igbo yaseNingizimu Mpumalanga yeNigeria lapho u-Eze enezimpande zomndeni wakhe.
Iqiniso # 3 - Izilwane ezifuywayo:
Njengamaqhinga amaningi ebhola, i-Eze inkulu ngokugcina izilwane ezifuywayo ikakhulukazi izinja. Unenja yohlobo oluyivelakancane ayivame ukuthatha izithombe ezifanelekayo ze-Instagram abalandeli abazithandayo. Bona esinye sezithombe ezinhle kangaka ngezansi.
Uyacelwa ukuthi uthinte umdlali noma iklabhu yakhe yabazali noma nini lapho ubona inja elahlekile ebukeka kanjena eLondon. IG.
Iqiniso # 4 Ama-tattoos:
U-Eze ngaphandle kwama-tattoos noma ubuciko bomzimba - ngalesi sikhathi - ngoba ubabona njengokwengezwa okungenasidingo. Usebenzela ukusebenzela ukwakha umzimba omuhle ohambelana nokuphakama kwakhe okumangazayo okungamamitha ayi-5.
Iqiniso # 5 Trivia:
Ubuwazi ukuthi unyaka wokuzalwa kuka-Eze - 1998 udume ngokuba unyaka owasungulwa ngawo injini yokusesha i-Google? Endaweni yezokuzijabulisa, ngo-1998 wabona ukukhipha amafilimu athandwayo afana neTitanic ne-Saving Private Ryan.
Okunye ukwethulwa nokukhululwa okwenze u-1998 kwaba unyaka othokozisayo. I-Google ne-IMDB.
Ukudlwengula amaqiniso wethu we-biography, sikunikeza i-wiki ka-Eberechi Eze. Leli thebula lizokusiza ukuthi ulande imininingwane esheshayo nengashoyo mayelana nebhola lezinyawo.
Igama eligcwele: U-Eberechi Oluchi Eze.
Usuku lokuzalwa: 29 Juni 1998 (iminyaka engama-21).
Indawo yokuzalwa: IGreenwich, eNgilandi.
Bazali: UMnu noNkk Eze.
Izakwethu: U-Ikechi noChima (abafowethu).
Umsuka womndeni / izimpande: Okhokho baseNigeria.
Imfundo yebhola: UMillwall.
Ukuphakama: I-5 ft 8 ku (1.73 m).
Okungasetshenziswa kweFIFA: 83 (iFIFA 20).
Idatha ka-Eze Eberechi's Wiki
QAPHELA: Siyabonga ngokuthatha isikhathi sokufunda inguqulo yethu ye-Eberechi Eze's Indaba yengane -kufaka phakathi kwakhe amaqiniso we-biography. KwaLifeBogger, silwela njalo ukunemba nokungakhethi. Uma ubona okuthile okungabukeki kulungile kulendatshana, sicela ubeke amazwana akho noma usithinte.